Endogenous opioids သည်လိင်မှုကိစ္စကိုတားဆီးပေးသည်၊ သို့သော်ကြွက်များတွင်လိင်စိတ်ကြွယ်ဝမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံခံစားမှု (2013) - Your Brain On Porn
ပြုမူနေ neuroscience ။ 2013 Jun;127(3):458-64. doi: 10.1037/a0032332.
Garduño-Gutierrez R ကို, Guadarrama-Bazante L ကို, Leon-Olea M က, Rodriguez-Manzo, G.
Departamento က de Farmacobiología, Cinvestav Sede Sur, Cinvestav Sede Sur, မက္ကစီကိုစီးတီး, မက္ကစီကို။
သုတ်ရည်လွှတ် endogenous opioid လွှတ်ပေးရန်အားပေးအားမြှောက်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်ထိတစ်ကြာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးနှင့်အထွေထွေမူးယစ်ဆေး hypersensitivity အရှိဆုံးထင်ရှားနေသောအကြားအတော်ကြာတည်မြဲအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲထုတ်လုပ်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်ထိမျိုးစုံအဆက်ဆက်သုက်ကပါဝငျသောကြောင့်, ဒီအလုပ်အတွက်ကျွန်တော်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုရန်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းမျိုးစုံသုက်အားဖြင့်ဖြန့်ချိသည့် endogenous opioids ဟာယခုတင်ပြသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါ, တွေးဆ။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, လိင်အတွေ့အကြုံရှိအထီးကြွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှသုတ်ရည်ထိရှေ့တော်၌ထို opioid အဲဒီ receptor ရန် naltrexone နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြခြင်းနှင့် 24 ဇနောက်ပိုင်းမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး hypersensitivity အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အဆုံးစွန်သောအဆိုပါ 5-hydroxytryptamine-1A (5-HT1A) အဲဒီ receptor agonist 8-hydroxy-2-di-n-propylamino-tetralin (၏ဆေးများတုံ့ပြန်ထဲမှာ, serotonergic syndrome ရောဂါ၏ပြားချပ်ချပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟန်အနေအထားနိမိတ်လက္ခဏာ၏အသွင်အပြင်အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည် 8-Oh-DPAT), သာမန်အားဖြင့်ဒီနိမိတ်လက္ခဏာကို inducing များထက်နိမ့်။ နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်ပြီးသားလိင်မောတိရိစ္ဆာန်များ (ဆိုလိုသည်မှာ 24 ဇလိင် satiation ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးနောက်) မှ naltrexone စီမံခန့်ခွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။
ရလဒ်များ endogenous opioids ဟာကြာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးသော်လည်းမမူးယစ်ဆေး hypersensitivity ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျန်ဖြေကြောင်းပြသ (8-Oh-DPAT မှ) လိင်မောအထီးကြွက်၏ဝိသေသ။ ဒါဟာသူတို့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ် satiation မှသုတ်ရည်ထိ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်လာနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတစ်တစ်ချိန်တည်းသင်တန်းကိုလိုက်နာပေမယ့်ကောက်ချက်ချနေသည် ကွဲပြားယန္တရားများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်.
PsycINFO Database ကိုမှတ်တမ်း (ဂ) 2013 ယား, ရှိသမျှ rights reserved ။